Isantya esiphakamileyo Sokuziswa kweBhule Brass Tubes kwi-Brass Assembly
Ukuze kwangaxeshanye uphuculo olusebenzayo olupheleleyo Suctionering Brass Tubessolder kwindibano yeebhedi zamanzi zobhedu ngokufudumeza kofakelo.
Umshini wokuHubula we-DW-HF-15KW
Ubushushu: I-424 ° F (217 ° C)
Ixesha: imizuzwana eli-10 kude kufike ukuhamba kwealloy; Imizuzwana eli-15 yokuvumela i-alloy ukuba iphumele ngaphandle ityhubhu.
Ingqungquthela yebrashi yamanzi
• I-lead-free ethengisi yomthengisi
Ukusetyenziswa kokuncamathisela ukuthengiswa kwezinto
Ibrass inlet / iityhubhu zokuphuma zaziswe ngempumelelo kwindibano yobhedu nazo lokutshisa. Isiqwenga kufuneka sibekwe endaweni ukuze ityhubhu isondele esiphelweni sekhoyili. Umthengisi odibeneyo eludongeni olunciphileyo lwendibano uya kufikelela kwiqondo lokushisa elinemizuzwana ngemizuzwana eli-10. Umdibaniso wesibini odibeneyo uya kufikelela kwiqondo lokushisa elinobuncinci kwimizuzwana eli-10 kamva (imizuzwana eli-15 iyonke). Isongezelelo semizuzwana emi-5 yokufudumeza kunokuba yimfuneko ukuvumela umthengisi ukuba ahambe ngokulingeneyo kwiibhubhu ukuphucula umgangatho wokugqibela kunye nokubonakala.
iindidi Teknoloji tags I-HF ethengisa iityhubhu zobhedu, ukuxutywa kwevama, ubhedu obuninzi be-soldering, ukutyunjwa kokungena, indibaniso yokuthengisa ethengiswa ngobhedu, umshini wokucoca, ukufunyanwa kweeshubhu zentengiso, i-soldering, ubhedu, iityhubhu ezenziwe ngobhedu Post yokukhangela